Ungayifumana njani i-SEO Cheat | Martech Zone
NgoMgqibelo, uJanuwari 21, 2012 NgeCawa, nge-22 kaJanuwari 2012 Douglas Karr
Ukulungiswa kweinjini yokukhangela likrele elintlangothi-mbini. Ngelixa uGoogle ebonelela ngezikhokelo kubaphathi bewebhu ukuze basebenzise iisayithi zabo kwaye basebenzise amagama aphambili ngokufanelekileyo ukuze bafumane kwaye babonakalise ngokufanelekileyo, abanye abantu be-SEO bayazi ukuba ukuxhaphaza ezo algorithms kunokubadubula ngqo phezulu. Abasebenzi be-SEO baphantsi koxinzelelo olukhulu lokugcina iinkampani zabo zibeka kakuhle, abacebisi be-SEO baphantsi nangaphezulu.
Iinkampani zisenokungaqondi ukuba abasebenzi bazo banokuthatha iindlela ezimfutshane. Kwaye iinkampani ezityala imali kubacebisi be-SEO okanye iiarhente zinokungazi ngokupheleleyo ukuba umcebisi uzifumana njani kwinqanaba abalifunayo. Ebutsheni bonyaka ophelileyo, uJC Penney wakufunda kabuhlungu oku xa iNew York Times yayiqhuba inqaku, Iimfihlelo eziNcinci eziNgcolileyo zokuKhangela. Ukuziqhelanisa kuyaqhubeka, nangona kunjalo, kuba izibonda ziphezulu kakhulu.
Unokufumanisa ukuba ukhuphiswano lwakho luyakopa. Njani? Kulula kakhulu.
Ukuba umcebisi we-SEO okanye umqeshwa ungaze ukucele ukuba wenze uhlengahlengiso kwindawo yakho okanye kumxholo wakho, kukho ithuba elihle lokuba basebenza ngaphandle kwesiza ukwenza umxholo onxibelelanisa nokubuyela kwindawo yakho ngamagama aphambili atyebileyo. UGoogle ubeka iisayithi ngokusekwe ekubeni zingaphi ezinye iisayithi ezinxibelelana nazo. Ikwasekwe kwigunya lokudibanisa indawo. Ukuba ubhatalela umxholo ongaphandle kwesiza, mhlawumbi ubhatalela i-backlinks kwaye usenokungayiqondi.
Khangela i-domain ongayikrokrela kuyo Vula i-Explorer Site. Ngenisa idomeyini kwaye ucofe i Umbhalo weAnchor ithebhu. Njengoko iphepha liphuma kwiziphumo, jonga kwindawo nganye ekuyiwa kuyo usebenzisa amagama aphambili ukudibanisa kwi-domain umbuzo. Xa uqala ukufumana iiforamu ezivulekileyo, amakhonkco kutyikityo lwabasebenzisi, kunye neeblogi ezingenangqondo… usenokuba usebenza ngeerlinks ezihlawulelweyo.
Ukuba umcebisi wakho we-SEO ngu Ukubhala nokuthumela umxholo kwinkampani yakho, qiniseka ukuba uyavuma lo mxholo kwaye ufumane uluhlu lweendawo apho bengenisa khona. Musa ukuvumela umxholo wakho ukuba upapashwe kwiisayithi ezingahambelaniyo, zizele iintengiso kunye nezinye i-backlinks, okanye umgangatho ophantsi ngokubanzi. Ufuna inkampani yakho inxulunyaniswe nolona phawu lubalulekileyo kunye nomgangatho- yamkela eyona ilungileyo.
Nokuba uyavuma umxholo, qhubeka ukuya Sebenzisa i-Open Site Explorer ukuhlalutya i-backlinks entsha. Ngamanye amaxesha abacebisi be-SEO baya kuthumela umxholo ovunyiweyo endaweni enye, kodwa baqhubeke nokuhlawula okanye ukubeka ezinye i-backlink kwenye indawo. Ukuba ibonakala ingaqhelekanga, mhlawumbi kunjalo. Kwaye ukuba uninzi lwamalinki lukhangeleka lungaqhelekanga, mhlawumbi usebenza ngokukhohlisa kwe-SEO.
Kuyenzeka ukuba wandise ngokukhawuleza inqanaba lendawo yakho ngokwendalo. Ukulungiselela indawo yangoku kunye neqonga linyathelo lokuqala, kwaye emva koko ukuyinyusa elandelayo. Sithanda ukusebenzisa iifemu zobudlelwane noluntu ezisemthethweni ngobudlelwane obukhulu bamajelo eendaba ukwenza amabali egameni labathengi bethu. Asisoloko sifumana i-backlink… kodwa naxa singafumani, sifikelela kubaphulaphuli abafanelekileyo. Sikwasebenzisa iphepha elimhlophe, i-ebook, iminyhadala kunye ne-infographics ukufumana ingqalelo. Xa unento exhuma ukunxibelelana nayo, abantu baya kuyidibanisa nayo.
Uqinisekile ukuba uchonge ukukopela, yintoni elandelayo?
Ngaba ngumqeshwa? Ukususa amakhonkco amabi akunakwenzeka, kodwa ungabacela ukuba bazame. Bazise ukuba ayamkelekanga kwaye ibeka yonke inkampani emngciphekweni. Kuphephe ukuvuza abasebenzi bakho ngenqanaba elingcono okanye ivolumu. Endaweni yoko, bavuze Ukufumana ukukhankanywa okungakholekiyo kwiziza ezifanelekileyo.
Ngaba ngumcebisi we-SEO? Babase.
Ngaba umntu okhuphisana naye? I-Google Search Console enefom yokunika ingxelo ngenisa i-domain ethenga i-backlinks kunye nesiza okanye inkonzo uyazi ukuba basebenza kunye ukuzifumana.
Ukungazi kakuhle akukhuseli xa kuziwa ekukhohliseni ukufumana isikhundla se-SEO. Ukuhlawulela i-backlinks kukophula imigaqo yeGoogle kwaye uya kuyingcwaba indawo yakho, nokuba ubusazi ngayo okanye hayi. Bhala umxholo omkhulu, ofanelekileyo rhoqo kwaye uya kuba nomxholo otsala uphando lwezinto eziphilayo. Sukuba nexhala okanye uhendeke ukuba uqhathe kugxilwe kwizinga lezinto eziphilayo… Gxila kumxholo omkhulu kwaye uya kuzibonela ungcono kwaye ungcono.
Inqaku lokugqibela koku. Bendihlala ndisebenza kumaqhinga abuyela umva ngalo lonke ixesha. Ngaba ndikhe ndahlawula i-backlinks yam okanye eyabaxhasi bam? Ewe. Kodwa ukusukela oko ndafumanisa ukuba ezinye iindlela zokwazisa zihlala zikhokelela mkhulu iziphumo… hayi kutyelelo nje kuphela, kodwa okuhlekisayo kukuba isikhundla njengokuba! Ndisahlalutya isikhundla sabathengi bethu kwaye ndiphonononge i-backlinks rhoqo. Ngokuhlalutya i-backlinks yabo kunye neendawo abafumana ukukhankanywa kuzo, ndihlala ndifumana izixhobo ezinokubhala malunga nabaxhasi bam. Ndihlala ndibonelela ngezi zinto kujoliswe kuzo kwinkampani yethu yobudlelwane boluntu kwaye bafaka amabali amnandi apho.
tags: ukuxhuma umvakukunikaenjini yokukhangela nounSEOUkuqhagamshela ngasemva
Incwadi Yonke iNgcali yoHlahlelo lokuFunda kufuneka ifundwe
Jan 22, 2012 ngo-11: 58 PM
Esi sisithuba esifanelekileyo kum. Kudala ndikhangela ukuthunyelwa kwiziko elizimeleyo le-guru.com kwaye kuyothusa inani leziza ezifuna laa bump inkulu kwangoku kumakhulu nje ambalwa eerandi. Iyakwenzeka njani le nto, siyazibuza, ngaphandle kweerlinks ezihlawulelweyo, kunye nezinye iindlela ezingalunganga?
Njengoko ucebisa, i-PR yindlela eqinileyo yokuphakamisa iprofayile yewebhusayithi yokukhangela kunye nethuba lokufumana umyalezo wakho ngokubanzi. Ukwenza umxholo wesiza sakho kunye nolwakhiwo kubalulekile nako. Nangona kunomdla ukubona indlela amajelo eendaba ezentlalo ayiphazamisa ngayo inqanaba lokukhangela, kuba ungafumana iindwendwe ezizezona zibalulekileyo kwindawo yakho nge-SM enkulu, kwaye isikhundla sikaGoogle singathatha ixesha ukuba sibambelele kwinto yokuba wena zichaphazelekayo. I-SEO akufuneki ijongwe kwisithuba.
Jan 23, 2012 ngo-1: 10 PM
Kukho izinto ezingaphezulu kwama-22 ezibalulekileyo kwiNqanaba lakho, kwaye zinokufana neendlela ze-8/10 ze-SPAM, ii-autopost, amakhonkco, amakhonkco ahlawulelweyo, ukuvimba….
Eyona nto ibaluleke kakhulu yinto yomntu, into eyiNombolo eyodwa UMXHOLO wakho.
Isikhundla sikaGoogle asizondwendwe kuphela, libeka ixesha abalichitha kwindawo yakho, ixesha elininzi lithetha umxholo womgangatho, bafumene ulwazi abalukhangelayo, kwaye babuya kwakhona ..
Andiyiblogi enkulu okanye umthengisi ophumeleleyo, ndiyaqala kodwa ungacingi ukuba amakhonkco ahlawulelwayo asebenza ngaphezulu komxholo womgangatho
amaphepha ashushu ashushu kunye nokhuphiswano lwakho olungengobungcali.
Yonke enye indlela yokuphanda ithagethi yakho, igama eliphambili… uGoogle ngumbutho ovulekileyo ekufuneka uyazi ukuba ungazidibanisa njani izinto kwaye unokufumana konke